Walitti makamuu ADWUI xiinxaltoonni siyaasaa akkamiin ilaalu? - BBC News Afaan Oromoo
Koreen Hoji-raawwchiiftuu ADWUI har'a walga'iitti jira. Walga'iin kunis ajandaa walitti makamuurratti ni mari'ata jedhamee eegama.
ADWUIn osoo TPLF keessa hin jiraatiin walitti makamuuf jira kan jedhus dhaga'amaa jira.
Kana waliin walqabsiisuudhaan xiinxalaa siyaasaa kan ta'an Adam Kaasee (PhD) akkasumas, aanga'aa ol-aanaa TPLF kan turan Obbo Gabruu Asiraatiin dubbisneerra.
ADWUI'n ijaarama akka addaatti turerraa gara paartii walitti makametti imalli taasisu yeroo hedduu kan ka'aa ture ta'ullee qabatamatti hojiitti hiikamee hin mul'anne.
Paartilee sabummaarratti hundaa'ani walitti dhufaniin kan uumame ADWUIn dhuguma walitti ni makamaa?
Gaaffiin kun irra deddebiin ka'aas tureera. Dhiyeenya kana ammoo TPLF osoo keessa hin jiraatiin walitti makamuu danda'aa kan jedhu odeeffamaa jira.
Xiinxlaan siyaasaafi miseensi TPLF buleessi duraanii kana jedhan.
"Walitti makamuun ADWUI amma dhugaa ta'uun kan dhiyaate fakkaata" Adam Kaasee (PhD)
TPLF irraa kan hafe paartileen miseensa ADWUI ta'an sadan mirkaneessaniiru jechuun aanga'aan Addichaa Obbo Fiqaaduu Tasammaa dhiyeenya kana miidiyaa biyya keessaaf ibsaniiru. Kun ammo kan agarsiisu, dhimmi walitti makamuu akkuma itti fufetti jira jechuudha jedhu Dr. Adam.
Akka xiinxalaan siyaasaa kun jedhanitti, walitti makamuu kana TPLF mormaa turullee waan hafu hin fakkaatu.
Adeemsa walitti makamuu kana tokko tokkoon ifatti wanti hanga ammaa beknu kan hin jirre ta'ullee, paartii haaraa walitti makamuun uumamuuf jiru kana gadi fageenyaan hubachuudhaaf rakkisaadhu jedhu.
Keessumaa dhimmoota ifatti beekamuu qaban (kan akka dhimma Finfinneerratti) ODPfi ADPn murteewwan maalii akka fudhatan hin dhageenye jedhu.
Walitti makamuun kun milkaa'ee paartiin haarawaa kun, walitti makamuun kunis bakka TPLF hin jirretti ta'uun, paartileen duraan deggertoota jedhaman kan akka Somaaleefi kan biroo waan itti makamaniif bakka bu'uu ni danda'u jedhan.
Akka Dr. Adam jedhanitti wanti rakkisaa ta'u TPLF yoo walitti makamuu kana keessaa hafe, paartileen biroo isa waliin hojjetan barbaaddachuun isaa waan hin oolleef rakkoo uumuu mala.
Naannolee Oromiyaafi Amaaraa keessatti beekamaniifi bu'uurri hundeeffama isaanii sabummaa ta'ani isaa kan waliin walfakkaatan kan akka ABO, KFOfi ABIN waliin TPLF walbarbaaduu danda'u jedhu.
Paartileen kunneen bu'uura saba keessatti hundeeffaman waan qabaniif isaan kana waliin hojjechuuf fedhiin jiraachuu mala tilmaama jedhu dhiyeessu hayyuun siyaasaa kun.
Haata'u malee, naanno Oromiyaattis ta'e naannoo Amaaraa keessatti paartileen TPLF waliin waliif ta'an jiraatanillee, paartileen naannolee lamaan kanaa bulchaa jiran mormitoota naannolee isaanii keessa jiran waliin dubbachaa jiru.
Kun ammoo kan TPLF waliin walitti dhufuu barbaadu jalaa xiqqessaa deemuu mala jedhu Dr. Adam.
TPLF waggoota shantamman dhufan keessa naannoo sana keessatti jabaatee itti fufuu ni danda'a kan jedhan Dr. Adam, paartileen naannoo biroo keessa jiran waliin walitti dhufeenyaan hojjechuun akka yaadame salphaa ta'uu dhiisuu danda'a jedhu.
"Carraan TPLF qofaa ta'uu bal'aadha. ADWUI waliin mari'achuun waliin itti fufuu ykn ammoo paartilee biroo waliin hojjechuuf carraan jiru rakkisaa ta'uu danda'a," jedhu.
TPLF sadarkaa biyyaatti paartii dhiibbaa uumuu danda'u ta'ee itti fufuudhaaf paartilee gurguddoo keessa seenuun irraa eegama. Kana ammoo paartii ykn adda kamiyyu waliin ta'ee gochuu ni danda'a jedhu hayyuun siyaasaa kun.
"TPLF ibsa baasu keessatti ni foxxoqna jedhee hin beeku. Akka sirna jiruutiin ammoo aangoo sadarkaa naannootti jiru gaafachuun waan yaraa miti," jedhu.
Adeemsi walitti makuu MM Abiy gaggeessaa jiran kun dhimma namoonni hedduu mormii irratti kaasan ta'ullee haala gaariitiin yoo deeme, akkuma ministirri muummichaa irra deddeebiin kaasan paartileen xixiqqoo liqimfamanii paartileen yaada irratti gurmaa'an uumamuun isaanii hin hafu jechuun tilmaamu.
Akka Dr. Adam jedhanitti ministitti muummee filannoo itti aanutti aangoorra turuu mirkaneeffachuuf naannoo isaaniitti carraan sagalee argachuu isaanii shakkisiisaa waan ta'eef yoo ADWUIn walitti makame naannolee biroorraa sagaleen argatan carraa isaanii akka ballisuufii danda'u himu.
"Paartiin diigamuu danda'a, kun garuu hiree biyyaa murteessuu hin qabu," Obbo Gabruu Asraat
Hogganaa olaana TPLF kan turan Obbo Gabruu Asraat dhimmi walitti makamuu yeroo ka'u waligalteen paartilee hundaa keessa hin jiru taanaan, paartii biyya bulchu keessa waldhibdeen akka hin jirre mul'isa jedhu.
Biyyaa kamittu paartin tokko yeroo diigamu haaraan hundeeffamuu kan danda'u ta'uu ibsuun, adeemsi kun gara Itoophiyaa yeroo dhufu garuu maal uumuu akka danda'u akkanaan ibsu
"Itoophiyaa keessatti paartiin biyya bulchu caasaa mootumma gutummaatti kan to'atufi uummatas to'achuu kan yaaluu waan ta'eef paartiin tokko yeroo dadhabu rakkoleen uumaman jiru."
"Hundeessittota paarichaa afran keessa tokko kan ta'e TPLF [walitti makamuu] keessaa yoo ba'e, warri hafanis mari'atanii waliif hin galan taanaan rakkoon isaa kan uummataaf hafu ta'a."
Siiyaasaa Itoophiyaa keessatti, ADWUI dabalatee paartileen kan wal morkatan odoo hin taane, kan bu'aadhaan walitti hidhaman akkasumas immo inni tokko isa tokkoon kan guufachiisa deemu ta'uu ibsuun " hanga ammattiyyuu paartiin biyya bulchuu waliigaluu fi tokko ta'uu dhisuun isaa Itoophiyaatiin gaatii baayyee kaffalchiiseera," jedhu.
Obbo Gabruun, akka ka'umsaatti walitti makamuu akka hin mormineefi kanarrayyu ADWUI'n walitti makamuuf barfaateera jedhanii akka yaadan dubbatu. Ta'us garuu waligalteen osoo hin umaaminiifi tapha siyaasaaf jecha aariitiin walitti makamuun itti fufiinsa ni qabaataa? Jechuun gaafatu.
ADWUI'n walitti makamuun yoo irra jiraate sagantaafi seeraa ittiin bulmaata waliinii qabaachuu akka haal dureetti kaa'u. TPLF walitti makamuu kanaratti hin hirmaadhu yoo jedhe mirga isaa akka ta'eefi rakkoo akka hin uumne dubbatu. Ta'us garuu dhimmi kun haalotaa rakkoo inni uumuu danda'u lama akkanaan kaa'u.
"Tokkoffaa paariitileen hafan sadan kan ani jedhu qofa, ilaalchakoo qofa yoo fudhatan malee walitti hin makamu yoo jedhame dogoggoradha. Lammaffaan, ani walitti makamuu kana keessa hin jiru taanaan Tiigraay ni foxxoqxi adeemsi jedhuus dogoggora natti fakkaata."
Waldhibdee paartileefi morkii aangoo gara uummataatti geessanii, ani aangoo kana keessa hin dhaabbadhuu taanaan uummatnis ni foxxoqa ilaalchi jedhu dogoggora ta'uu Obbo Gabruun ni ibsu. Kun karaa qabeenyaa, nageenyaafi karaa haariiroo diploomaasiis uummata Tigraayiif raakkoo guddaa kan uumuufi wanta uummati kun baayyee itti qabsaa'ee argates kan dhabamsiisu ta'uus ni dubbatu.
"TPLF ilaalchasaa kan adeemsisu yoo itti fakkaate dhaabillee waliin walitti makamuuf mirga qaba. Paartiin diigamu danda'a kun garuu hiree biyyaa murteessu hin qabu. Biyyi diiqamuu danda'a jechuunu balaafamaadha," jechuun ejjennoo isaani ibsaniiru.
TPLF akka paarii morkataatti itti fufuu danda'aa? Jechuun gaaffii nuti dhiyeessineef, maarii fi waligalteen yoo hin jiraanne paartii keessa ba'anii ejjennoo ofii adeemsiuun siyaasa keessa ka jiru ta'us, ammatti TPLF haalaa dadhabaa keessa kan jiru ta'uu ibsuun: " ilaalcha amma hordofu qabatee uummata waliitti niiqaba yaada jedhu hin qabu " jedhaniiru.
Iddoo wiirtuu dhaabni ture akkamiin yeroo gabaabaa keessatti diigame? kan jedhu yaadamuu qaba kan jedhan Obbo Gabruun rakkoo kana dhaabanne yoo ilaalle deebisee paartii ta'uu akka danda'u ibsaniiru.
Torban tokko dura barruulee TPLF kan ta'e 'Wayin' irratti guyyaan filannoo biyyaaleessa kana chi siqsamu yoo ta'e naannoon Tigraay filannoo ofiisaa gaggeessuun 'de facto state' ni ta'a jedhamuun isaa ni yaadatama.
"Wanti jedhame dhugaa waan ta'u nati hin fakkatu," jedhu Obbo gabruun. Yeroo ammaatti dhaalattooni Tigraay iddoo adda addaarra buqqa'aa jiraachu fi paartileen ADWUI biroo uummata Tigraayfi TPLF irratti dhaadachaa kan jiran ta'uu ibsuun "karaa hundaayyu adeemsi finxaaleesummaa jira" jedhu.
"TPLF qofa osoo hin taane ADP fi ODP'n siiyaasa finxaaleessumaa adeemsiisaa jiru." Finxaaleessumma mootummaa ofii keenya uummanna jedhu haalli yerichaa kan uumedha. Ta'us garuu rakkoo haalli yeroo uume akka tarsimoo itti fufiinsatti fudhachuun rakkoo qaba," jechuun dubbataniiru.
Paartiin tokko waan mo'aameef, hoggansii paartii aangoorra wan kaafameef hireen uummata Tigraay isaan murteeffamu hin qabu kan jedhan Obbo Gabruu, "Durumaanu saba fi sabni wal hin lolu, wal hin waraanu walirraas hin faagatu" jechuun eeraniiru.